एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील शाहको दुई बर्षे रोडम्याप । - Lekbesimusic | Min Darlami
सुनील साह एनआरएनए अमेरिकाको नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । यहि जुलाईको ६ तारिख सिकागोमा सपथ खाएपछि उनको ‘अध्यक्ष’ यात्रा प्रारम्भ हुनेछ। एनआरएनए अमेरिकाको सल्लाहकारदेखि बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुदै अध्यक्ष बनेका साहको आउने दुई बर्ष कसरी बित्ला ? उनका भावी योजना केके होलान ? अहिले सबैको मनमा उठिरहेका प्रश्न यिनै हुन्। सिकागो सम्मेलनको पुर्ब सन्ध्यामा मैले साहलाई “पहिला त पराजित साथीहरु असन्तुष्ट छन्, कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ?” भनेर सोधेको थिएँ ।
उत्तरमा साहले भने, “मैले संस्थामा देखिएका कमिकमजोरी ‘सुधार गर्ने’ र पराजित साथीहरुलाई ‘समेट्ने’ दुई मूल मन्त्र बनाएको छु।” साहले काम पनि शुरु गरिसकेका बताए । उनले भने, “पराजित नब्बे प्रतिशत साथीहरुलाई फोन गरेर उहाँहरुको ईच्छा बुझेको छु । कतिको फोन उठेको छैन ।” साहले थपे, “उहाँहरु सबै केहि गर्छु भनेर अगाडी आउनु भएको हो । हामीसंग धेरै कमिटीहरु छन् र ठाउँहरु छन् । सबैलाई उहाँहरुको क्षमता र संस्थाको आवश्यकता अनुसार स्थान दिन्छु।”
साहले प्रवासमा रहेका पचास लाख नेपालीको ‘आइडेन्टिटी स्टाब्लिश’ गर्ने काम नै आफ्नो पहिलो र महत्वपूर्ण योजना हुने बताए । “प्रवासमा रहेका हामी नेपालीहरु अहिले पनि ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ मा छौं । संबिधानमा हाम्रा हकहीत सुरक्षित भएपनि कार्यान्वयनमा केहि बाधा देखिएको छ । म आईसिसिसंग यो बिषयमा सहकार्य गर्ने छु ।” साहले भने । आईसिसि र एनसिसिका विभिन्न टास्क फोर्स र कमिटीमा रहेर काम गरिसकेका साहलाई अब बिगतमा आफैले दिएका कतिपय सुझाबहरुको कार्यन्वयन गर्ने दायित्व आफ्नै काँधमा आएको छ।
एनआरएनए अमेरिकाको आफ्नै योजनाका बारेमा केन्द्रित हुदै साहले भने, “संस्थाको फ्रेम बनिसकेको छ । अब म यसलाई खँदिलो बनाउनेतर्फ लाग्नेछु ।” अहिलेसम्म आफुहरुले च्याप्टर गठन गर्ने, बिधानमा थपघट गर्ने र ब्यबस्थित सदस्यता वितरण र निर्वाचन प्रणालीको लागि नै धेरै समय खर्च गरेको बताए। “एउटा सामाजिक संस्था शुरुदेखि नै पटक पटक अदालत पुग्नुपर्दा आशातित उपलब्धि नदेखिएको हुन्सक्छ ।”साहले अगाडी भने, “अब सबैले यो संस्थाको उद्देश्य र महत्व बुझेर एकसाथ अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन ।”
आईसीसीसंगको सहकार्य र एनआरएन अमेरिकाका प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका अतिरिक्त सुनील साहले बिद्यार्थीका समस्या र एच वान बी भिसामा अमेरिकामा बस्नेका समस्याहरु आफ्नो अर्को प्राथमिकता हुने बताए । एनआरएनहरुले भोगेको अर्को समस्या च्याप्टरहरुको दर्ताको प्रोशेस भएको बताउदै साहले छिट्टै सबै च्याप्टरहरुलाई दर्ता गरिसक्ने जानकारी दिए । जसले गर्दा भोली कानूनी र प्रशासनिक झन्झट नआओस भन्ने उनको बुझाई छ।
सन् २०२० अमेरिकाको जनागणनाको बर्ष भएको उल्लेख गर्दै साहले नेप्लिज डायस्पोरासंग भने, “अमेरिकी सरकारका बिभिन्न निकायसंग सहकार्य गर्दै यस पटक सबै नेपालीलाई जनगणनामा सहभागी गराउने अभियान चलाउने छौं । यो पटक हाम्रो सही तथ्यांक संकलन गर्नुछ । ”
“एनआरएनए आफैले सेवाका नाममा सामुदायिक भवन बनाउने र क्लिनिक चलाउने मात्र गरेर पुग्दैन । यस्ता भैपरी आउने कार्यहरुमा हामीले स्थानीय च्याप्टरहरु र स्थानीय संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्नेछौं ।” साहले भने, “समुदायका आवश्यकता पहिचान गर्न हामी अलि बढी बहस र छलफलमुखी कार्यक्रम संचालन गर्नेछौं । पोलिसी लेबलमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ ।”
“अब हामीले सेवाको मात्र कुरा गरेर पुग्दैन । जन्मभुमी नेपालको सम्पति ल्याउन र यहाँबाट नेपालमा लैजान अनि नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक नीति नियम बनाउनु छ । त्यसका लागि नेपाल र अमेरिकी सरकारसंग पुल बनेर हामीले काम गर्नेछौं । अमेरिकामा पनि हामी र हाम्रा सन्तानलाई शिक्षा, रोजगार र राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर बहस संगसंगै ठोस कार्यक्रम ल्याउन पनि कार्यसमिति मार्फत सक्रिय हुनेछु ।” साहले भने ।
अमेरिकाको नेपाली समाजको सुख दुखमा आफु नेतृत्व एनआरएनए अमेरिका सधै सक्रिय हुने प्रतिबद्दता पनि उनले नेप्लिज डायस्पोरा मार्फत ब्यक्त गरे । “सबैसंग मिलेर जाने हो र संस्थालाई बृहत र विश्वसनीय बनाउने हो ।” साहले आफ्ना यी सबै योजना ‘सुधार गर्नु’ र ‘समेट्नु’ भित्र संगसंगै जाने बताए । यहि नै उनको रोड म्याप हो । साहले भने, “संस्थालाई आन्तरिक रुपमा ‘सुधार गर्ने’ र बाहिर भएका साथी र छोडिएका मुद्धा ‘समेट्ने’ गरी मैले सबै काम गर्नेछु।”
एनआरएन अमेरिकाका सम्भावित समस्याहरु कोट्याउदै गर्दा उनले भने, “निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो । प्रक्रिया स्विकारेपछि परिणाम पनि स्विकार्नु सबैको दायित्व हुनेछ । म त अब कसरी हाम्रा तमाम समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछु।”
साहलाई मैले अन्तिममा फेरी सोधे, “तपाईलाई पराजित साथीहरुले सहजै काम गर्न देलान?” उत्तरमा उनले भने -“एउटा जीवन्त संस्थामा सधै सुधारको गुञ्जायस रहन्छ, हाम्रो संस्थामा पनि छ । जिम्मेवार नेताले सधै हिजोको अनुभवबाट भोली हेर्न सक्नुपर्छ । साथीहरुबाट म यहि अपेक्षा गर्दछु ।” भोलिका दिनमा कमीकमजोरी नहोस भन्नेले साधारण सभामा आउनु पर्ने बताए । साहको आग्रह छ, “यो संस्थालाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर खाका कोर्ने काम साधारण सभाको हो । त्यसैले सबैलाइ यो सभामा सहभागी भएर उपयुक्त सुझाब दिन सबैसंग आग्रह गर्दछु । हिजोका कमी भोली नदोहोरियोस भन्ने हो भने बोल्ने उपयुक्त समय अहिले हो ।”
नेपालको धनुषा जिल्लाको जनकपुरस्थित लोहना टोलमा जन्मिएका साहको बाल्यकाल जनकपुरमा र युवावस्था काठमाडौँमा बित्यो । पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा नेविसंघको इकाई कमिटीमा बसेर बिद्यार्थी हक हीत र सेवामा लाग्ने प्रण गरेका थिए । साहलाई बंगलादेशमा ईञ्जिनियरिङ्ग पढ्न अवसर मिल्यो । बंगलादेशबाट ब्याचलर्स सकेर नेपाल मै सक्रिय साह मास्टर्स डिग्रीका लागि सन् २००४ मा अमेरिका आएका हुन् । अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित एक प्रतिष्ठित कलेजबाट मास्टर्स गरेका साहलाई कम्प्युटरमा कोडिंग गर्न खुब मन पर्छ । अहिले आईटी ईन्जिनियरका रुपमा काम गर्दछन र कन्सल्टेन्सी चलाएर बसेका छन् । कम्प्युटरको कोडिंग गर्न मन पर्ने साहलाई अमेरिकामा रहेको नेपाली समाजको छुट्टै कोडिंग गरेर राम्रो प्रोग्रामिङ्ग गर्ने उपयुक्त र चुनौतिपूर्ण अवसर मिलेको छ । आफ्ना र परायाका दशतिर फर्केका टाउका र तिनमा निहित अनेक आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्न अध्यक्ष सुनील साह कति जिम्मेवार र कति काविल हुनेछन त्यो हेर्न केहि समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
Previous बारी राम्रो तोरीले घर उज्यालो छोरीले
Next सिकागोमा (ONUF) ओएनयुएफको भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न ।